Thenga iHGH Thailand | Thenga iHormone Hormone eThailand | Kuphi ukuthenga i-HGH?
Ukukhula kwamaHlomu e-Thailand e-Thailand 100% ikhwalithi yomkhiqizo
Singabantu abasakaza ngokusemthethweni imikhiqizo ye-HGH eThailand. Senza ukuthunyelwa kwamazwe ngamazwe kuwo wonke amazwe. Yonke imikhiqizo yethu inezitifiketi zekhwalithi, i-prescription namalayisense. Shayela manje noma WhatsApp + 66 94 635 76 37 (Sebenzisa i-WhatsApp Thola i-2% Isaphulelo)
Izipesheli zikaFebhuwari! I-HGH engcono kakhulu eThailand i-Genotropin GoQuick ipeni 36 IU kusuka ku- "Pfizer"
Ukwesekwa kweKhasimende ye-24 / 7 nokuguqulwa ku-dollar kanye nemali yendawo
Isevisi yamakhasimende enomngane futhi esheshayo, sihlale silungele ukunikeza izeluleko iziguli zethu futhi siphendule yonke imibuzo mayelana nokwelashwa kwe-hormone, umthamo, inkambo, ukulethwa, amanani nokukhokha, ungakwazi futhi ukubeka umyalelo ngokusebenzisa umxhumanisi. Sicela ulondoloze inombolo yethu yefoni + 66 94 635 76 37
Sebenzisa i-WhatsApp Thola i-2% Isaphulelo
Sebenzisa uhlelo lokusebenza lweselula ukuze uhlole futhi uthole isaphulelo se-5%
Uhlelo lokusebenza luhlale lunewe, lwenza lula futhi luqhubekele phambili inqubo ye-oda. Landa manje kusuka kwi-Itunes esemthethweni uphinde uthole isaphulelo se-5%.
Landa kusuka ku-App Store
Isevisi enkulu kwamakhasimende!
Ekuqaleni ngangingabazi ukuthenga iHGH online. Ngangcolisa inkampani, futhi ngangihlaba umxhwele kakhulu ngamakhasimende abo. Baphendula yonke imibuzo yami mayelana nomthamo futhi baphendule ukukhathazeka kwami. Ngiyabonga
Ngake ngalaya i-Genotropin GoQuick, bavuselela ikheli lami lokuthumela. Bangithumelela inamba yokulandelela kanye nesithombe se-reciept .... ochwepheshe kakhulu. Ngincoma kakhulu le nkampani nomkhiqizo wabo, futhi ngiya phambili ukuze ngibe yikhasimende yesikhathi.
Siyabonga kakhulu nge-HGH. Uchwepheshe kakhulu. Ngisho nezidingo eziningi. Ngangingalindele lokho. Ngilondoloze inombolo yakho futhi ngiyidinga ngaphezulu ngizoxhumana nawe
- Ngiyabonga kakhulu, isevisi yamakhasimende enhle. Isitolo esithembekile. Iyalwe kanye namaphakheji umngane we-8, isitolo senze isaphulelo esihle kakhulu. Ngesaba kakhulu ukuthumela imali. Kodwa emva kwengxoxo sithumele imali ku-akhawunti yasebhange yesitolo. I-oda litholwe ezinsukwini ze-3! Isitolo esihle futhi esithembekile, ngiyabonga!
Siyabonga, kancane kancane, futhi wathumela imali ku-akhawunti yasebhange, i-hormone yokukhula yafika ezinsukwini ze-4 e-Chiang Mai
Ngiyajabula kakhulu ukusho ukuthi namuhla ipenotropin esheshayo ipeni ifike e-mail. Ngangimangaza ukuthi yenziwe ngamasiko kodwa ngiyajabula kakhulu ngiyabonga kakhulu
, Manje ngisindise ngokuningi
Ithole i-oda lami olulandelayo. Umkhiqizo osheshayo, okahle, kanye nekhwalithi. Kwangethusa ekuqaleni ngoba kuyabiza futhi kwakukhathazekile ukuthi kwakuyihlazo kodwa kuyathokozisa ukuthi akunjalo. Futhi isevisi evela kumthengisi inhle kakhulu.
Siyabonga ngale nkonzo enhle. Kungakhathaliseki ukuthi ngiseChiang Mai noma eBangkok, ukulethwa, ukuthengwa kwamakhasimende, kanye nekhwalithi yezokwelapha kuhlale kungenhla. Uzobuya njalo emva kwekhwalithi yesevisi abangibonise lapha.
I-HGH Thailand iyinto entsha eBangkok. Ngingu-expat isikhathi eside futhi angizange ngihlangabezane nomunye umuntu onika ngesikhathi. Gcina njalo izithembiso abazitshela zona. Umkhiqizo usezandleni zobuchwepheshe uze uzuze. Ukushisa okulungile kanye nezinaliti kufakiwe.
Singabantu abacwaningi bezocwaningo kanye nabasabalalisi bemikhiqizo yeHuman Growth Hormone emazweni amaningana kuhlanganise neThailand. Inkampani yethu yinkampani yokuqala eThailand engaqinisekisa ikhwalithi ephumelelayo kakhulu nokulethwa kwamahhala kwe-HGH. Singanikeza ukuthunyelwa kwe-Express ezinsukwini ezimbalwa ukuya kuphi eThailand.
Ithimba lethu lihlanganisa nabantu abaye basebenzelana nemikhiqizo elwa nokuguga iminyaka eminingi, ikakhulukazi i-HGH. Ucwaningo lwethu olude luveze ukuthi namuhla kunezinhlobo eziningi ze-HGH ezikhohlisayo ezitholakala ku-intanethi, kufaka phakathi i-HGH ejwayelekile evela eChina. Ngenxa yalokho, sakha ubudlelwano obude nabakhiqizi bemikhiqizo edumile ukunikeza amakhasimende ethu imikhiqizo yangempela ye-HGH ngentengo ye-generic HGH. Imikhiqizo yethu ingokoqobo, iphephile, futhi isebenza kahle futhi ivunyiwe yi-FDA (Ukudla nokuDrug Administration) emazweni amaningi.
Ukulethwa kwamahhala kuzo zonke izifunda zaseThailand
Ukudilizwa kwe-Express nokukhokhwa kwezimali ku-Bangkok. Sithumela i-growhormone nge-Air Cargo e-Chiang Mai, e-Phuket. Thumela i-mail ku-Pattaya, i-Hua Hin, i-Udon Thani, i-Koh Samui, i-Koh Chang, i-Suratkhani nayo yonke eminye imizi kanye nezifundazwe zaseThailand.Ukuthunyelwa kwezidakamizwa eBangkok - ikhemisi yethu ithatha imiyalo evela ku-9: 00 am - 8: 00 pm, imiyalo etholakele ngaphambi I-3: I-00 pm izohanjiswa nge-sameday.
Sinikeza ukuthunyelwa kwamazwe ngamazwe kuwo wonke amazwe omhlaba ngokusebenzisa isevisi yokuposa ye-UPS, kuthatha izinsuku ezingu-2-3. Siqinisekisa ukudiliva e-Australia, e-USA, eCanada, e-United Kingdom, eRussia naseYurophu. Amazwe aseMpumalanga Ephakathi ahoxiswa, i-Saudi Arabia, i-United Arab Emirates namanye amazwe
Indlela yokusebenzisa i-HGH
Isilinganiso somjovo ojwayelekile we-HGH ngu:
I-2 IU (0.6 mg) yabesifazane 25-35 ubudala ubudala obunzima kusuka ku-40-70 kg
I-3 IU (0.9 mg) yabesifazane besine-35 ubudala abanesisindo esingu-50 kg noma ngaphezulu
I-2 IU (0.6 mg) yamadoda engu-25-30 eneminyaka engu-80-100 kg
U-3 IU (0.9 mg) wabantu abaneminyaka engu-30 ubudala abanesisindo kusuka ku-80-120
Kungcono ukwenza umjovo ekuseni ngaphambi kokudla kwasekuseni ngesisu esingenalutho noma emva kokudla kokugcina amahora angu-2 ngemuva kokudla ngaphambi kokulala (Njengokwenza okuboniswayo, ukuhlukanisa umthamo wansuku zonke ezingxenyeni eziningana kunikeza umphumela ofanayo nomjovo we-1 ngosuku)
Inkambo egcwele iphela izinyanga ze-6 ukuqedela umphumela ophelele womzimba wamaphupho akho! Thatha izinsuku ezingu-HGH 6 ngesonto ngoMsombuluko - ngoMgqibelo (ngeSonto isikhashana) I-6 inyanga yenyanga ihlukaniswe yizingxenye ze-2 - izinyanga ze-3 izinsuku ze-6 ngesonto, bese ikhefu izinsuku ezingu-30, futhi izinyanga ezingu-3 ezinsukwini ezingu-6 ngesonto
Ukwelashwa kwe-HGH ukuze ulahlekelwe isisindo
Yonke inkambo ye-HGH akumele idlule izinyanga ze-6. Ngalesi sikhathi, ngokusho kochwepheshe, ukulahlekelwa isisindo kulahlekelwa ama-2 amakhilogremu amafutha futhi kutholakala ama-2 amakhilogremu emisipha ngenyanga, ngaphandle kokudliwayo nokuzivocavoca. Kodwa okubaluleke kakhulu, umphumela wanoma yiziphi izenzo ezihloswe ekuqedeni isisindo esiningi, kuzokhuliswa kakhulu. Ngakho-ke, isisindo esikhulu-ukulahlekelwa imiphumela kwi hormone ukukhula umxhwele kakhulu kunazo ososayensi.
Izinhloso zokulwa nokuguga
Amakhomoni akuzona izidakamizwa. Zizinto zemvelo ezibalulekile empilweni yakho. Njengoba ukhula, ukukhiqizwa kwe-hormone yakho kuyancipha kancane kancane, okuholela futhi kuphuthumise inqubo yokuguga nokuqala kwezifo ezihlobene nobudala. I-hormone yokuguqulwa esikhundleni se-hormone ivuselela umzimba wakho emazingeni asemasha amahomoni ngokuwabuyisela emazingeni umzimba wakho owawujwayele eminyakeni yawo emncane.
- Qala nge-2IU nsuku zonke ngaphambi kokulala (isisu esingenalutho).
- Izinsuku ze-5 futhi izinsuku ezingu-2 zivuliwe.
- Siphakamisa ukushintsha isikhathi sasekuseni / kusihlwa (njalo ezinyangeni ezimbili).
Iyini i-HGH Box?
I-HGH Box yikhasi elide lokukhishwa kwekhwalithi eliphakeme lomuntu likhula i-hormone ngezidingo zakho. Nge-HGH Box ungathola imikhiqizo yangempela ye-HGH kunanini ngaphambili! Uma ungathola i-HGH eshibhile ngokulingana kanye nekhwalithi efanayo, sizokunikeza isaphulelo esengeziwe. Izindaba ezinhle! Manje ungakwazi ukuyala i-HGH eThailand.
Izinzuzo ze-HGH Box:
- Uthola inani elanele, elanele umjikelezo we-1
Intengo Engcono kakhulu yezimpahla ze-HGH ezimakethe
- Izimali Zokubuyisela Imali Uma ungamukeli umkhiqizo wakho
Hamba kude ne-HGH yenkohliso!
Asifuni amakhasimende ethu ukuba asebenzise imali into engasebenzi, futhi esimweni esibi kunazo zonke kubangela ukulimala okukhulu empilweni. Ngakho-ke asikhuthazi ukuthengwa kwemikhiqizo ejwayelekile ye-HGH. Imikhiqizo yethu ayivunyelwe kuphela yi-FDA kodwa futhi iyinhlangano ehlonipheke kakhulu yokuvuselela iHuman Growth Hormone etholakalayo emakethe namuhla, ngokusho kwe-IMS, imfayili yokukhangisa eyaziwayo emhlabeni jikelele. I-HGH iqukethe i-Somatropin, eyimakhemikhali eyenziwa ngokwemvelo emzimbeni womuntu, eyakhiwe ngokulandelana kwe-191 amino acid.
Imikhiqizo yethu ye-HGH ikhiqizwa abaholi bezimakethe ngokuphelele njenge-AnkeBio, i-GeneScience Pharmaceutical and Pfizer engakwazi ukuqinisekisa abathengi ngesistimu esemthethweni neyingqayizivele yokulwa nokukhohlisa ukuqinisekisa i-HGH yangempela online.
HGH Thailand Pharmacy - ku-Google map (sicela ushayele ngaphambi kokuvakashela)